Munguva yakaoma panguva yeCOVID-19, chii chatingaite kuzvidzivirira isu nevatinoda? Kunze kwekupfeka kumeso kumeso kana uchienda & kugeza maoko kazhinji, ita zvakanyanya kurovedza muviri uye kusimudzira immune system yedu ingave imwe sarudzo yakanaka. Nekudaro, vanhu vane nzvimbo shoma uye kugwinya kwehutano ...
Kurwisa Epidemic Soft PVC Keychains
ne admin pane 21-02-15
Soft PVC keychain ndechimwe chezvinhu zvinozivikanwa kwazvo zvekupa kusimudzira bhizinesi rako, sangano kana chiitiko. Iwe unogona kushamisika kuti ingakurumidza sei zvishoma yakapfava PVC kiyi yakasimbisa kutengeserana kunze, apo vanhu vanoiisa muhomwe yavo, chikwama, makiyi, mota, mabhegi, nhare mbozha, zvese zvinoita ...
Mhando dzakasiyana dze mask accessories, zvakachengeteka uye zvakasununguka kupfeka
Masiki ekumeso akurumidza kuve anodikanwa ezuva nezuva mu2020, uye COVID-19 inotenda kwazvo nezvavanowana zvitsva. Kana iyo mask iri Regina Georges yekupfeka kwemazuva ese, saka izvo zvigadzirwa zvemask zvichakurumidza kuve Gretchen Wienerses naKaren Smiths weCoronavirus Preventio ...
Tsika Yakatarisana neMask Kumutengo Wakaderera
Masks ekumeso izvozvi chikamu chehupenyu hwedu hwezuva nezuva, unoda kuzvidzivirira iwe nevako vaunoda uye gadzira yakasarudzika kumeso kumeso kuita chirevo chemafashoni, kusiyanisa yako dhizaini zuva nezuva? Ndinofara kutaura kuti urikuuya kumutengesi chaiye uyo anokwanisa kugadzira yako wega kumeso mask ...
Multi-inoshanda Wireless Kuraja Disinfection Bhokisi & UV Disinfection Lamp
Wati wambonetswa nemaitiro ekuramba wakachena uye uine hutano, kunyanya muCOVID -19? Zvinhu zvedu zvitsva zvinogona kubatsira kugadzirisa ako mapuzzle. Kune mhando dzakasiyana dzezvinhu zvekurwisa iyo coronavirus. Isu tinopa iwo akawanda-anoshanda asina waya kuchaja / disinfection bhokisi & UV disinfectio ...
Yotarisana neMask Lanyards Uye Maketani Ndidzo Zvishongedzo Zvaunoda
Kupfeka mask yekudzivirira kumeso iko zvino pane runyorwa rwezvakakosha zvezuva nezuva muhupenyu hwedu kwemwedzi kana kunyange makore anouya, kureva izvozvo, kuwacha nekuchengetedza masiki evose akapatsanurwa kunogona kuita basa, uye hapana munhu anoda kurasikirwa nemeso kumeso nekuti ivo Akarisiya munzira. Isu tinofara ku ...
Acrylic Sheet Yekudyidzana Kwevanhu
ne admin pane 20-10-08
Iwe une zvakakwana zvekudzivirira munzvimbo kuchengetedza vadzidzi vako, vashandi uye vatengi kuchengeteka? COVID-19 yachinja maitiro anotaridzika nyika yedu. Nyanzvi yezvirwere zvinotapukira inopa zano vanhu kuti vasataudzane kana vachifanira kudya kunze pamwe chete. Mabhizinesi anotarisira kumisikidza zvikamu zvichaderedza iyo ...
Ruoko Sanitizer Holder
Denda iri kuenderera mberi yagadzira vanochenesa, vanochenesa uye vanochenesa zvinhu zvakakosha sezvo vatengi vachiedza napose pavanogona kufamba patsva uye vagare vakachengeteka, saka muridzi we sanitizer anoitirwa kubatsira kuitisa pakutanga kuti ivachengetedze varipo. Kuchengeta maoko kwakachena kwakakosha kupfuura nakare kose, zvinosuwisa, ...
Multi-inoshanda Metal Kuvhura Keychain
Ndinofara kuzivisa chigadzirwa chedu chakatengwa zvakanyanya: Multi-chinangwa simbi keychain iyo inogona kutakurwa zuva nezuva uye kuchengetedza hutano hwedu. Izvi hazvisi zvekungobata musuwo wekuvhura, zviri nyore kumanikidza mabhatani erevheta, kudhonza dhirowa uye magedhi emikova, kuvhura madhoo pasina conta yemuviri ...
Ruoko Sanitizer Silicone Bracelet
Ruoko sanitizer chishandiso chakakosha chehutsanana apo denda richiri rakasimba uye rakapararira. Isu taifanirwa kufunga zvese zvatinoziva nezve nzira yekuchengetedza kuchengetedza kwedu uye hutano, sekuwachisa mawoko nguva dzose, hutsanana hwakakodzera uye hutsanana nemaoko, izvo zvinonyanya kuitika kune vanhu ...
Isu Tinopa Kutapukirwa Kudzivirira Zvigadzirwa
SJJ Zvipo hazvipi chete zvinopa kumeso kumeso & mask muchengeti, bandana, ruoko sanitizer, sipo bepa, asi zvakare inopa mamwe marudzi akasiyana ehutachiona ekudzivirira zvigadzirwa. Kunyangwe iwe urikutsvaga silicone kuramba loop mabhandi, iyo yoga mabhora, iyo yoga mat, anti-snoring chin tambo kuti ikubatsire iwe kuwana ...
Fashoni MASKI AT fekitari Direct PRICE
ne admin pane 20-07-07
Nekuda kwekuvharika kumeso kumeso kuri kushomeka, chero mask iri nani pane kusasipo kubatsira kubatsira kudzora kupararira kwecoronavirus, uye kusarudza machira echiso kumeso ingava mhinduro huru. Runako Shiny Zvipo zvinopa yakashongedzwa machira kumeso kumeso kufekitori mutengo wakatarwa uye nekukurumidza kuendesa nguva, ine akasiyana ...